श्रीमती वा प्रेमिकाले यी ५ व्यवहार देखाए हुनसक्छ अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध ! – hamrosandesh.com
जब तपाई कुनै व्यक्तिसँग प्रेममा पर्नुभएकाे छ? यदि पर्नुभएकाे छ भने उसको हरेक क्रियाकलाप तपाईलाई राम्रो लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। तपाईलाई आफ्नो प्रेमीको हरेक कुराहरु राम्रो लाग्ने गर्छ। आज भोली बिवाह अगाबै युवा युव;ती बीच प्रेम सम्बन्ध रहने गर्छ।यस्ता केही सम्बन्धहरु बिहेमा परिणत हुन गर्छन भने केही छोटो समयमा नै अलग हुने गरेको पाइन्छ । आज हामी तपाईहरुलाई प्रेममा परेका युवतीहरुले देखाउने ५ भिन्न व्यवहारहरुको बारेमा बताउदैछौ ।
२. इ*र्ष्यालु : युवतीहरु कुनै पुरु;षहरुसँग प्रेममा परेपछि छुट्टै पहिले भन्दा हुनु सामान्य कुरा हो। उनीहरु आफ्नो प्रेमीको हरेक क्रियाकलाप हेरीरहने प्रयास राख्ने गर्छन र अन्य युवतीसँग बोल्दा समेत केटीहरुलाई इ;र्ष्या हुने गरेको पाईन्छ।
३. मोबाईलको प्रयोग : प्रेममा परेका युव;तीहरु फोनमा केटासँग लामो कुरा गर्छन् । प्रेममा परेपछि एसमएस र कल जाँच गर्दै युवतीहरु व्यस्त हुने गर्छन। राति राति सम्म केटीहरु फोनमा झु*ण्डि;रहेको देख्न सकिन्छ।
५. रोमान्टिक गित र फ्लिममा ध्यान : जो युव;ती कसैको प्रेममा परेका हुन्छन, उनीहरु रोमान्टिक गित र त्यस्तै फ्लिमहरुमा मात्र ध्यान दिने गर्छन। प्रेममा परेकाहरुले यस्तो गित सुन्नुको कारण के हुन्छ भन्दा कुनै पनि रोमान्टिक गीत आफैले गाएको जस्तो लाग्छ भने फिल्मका पात्र आफू नै भएको जस्तो महसुश हुने गर्छ।